Egwuregwu na akwụkwọ ahụ aja maka Android | Gam akporosis
kasị mma egwuregwu na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ bọọlụ, basketball, usoro 1 ma ọ bụ ọzụzụ egwuregwu ọ bụla ọzọ, n’okpuru ị nwere nchịkọta akwụkwọ ahụ aja nke ga - enyere gị aka ịhazi ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ụrọ gị na ndị ị kacha nwee mmasị.
Ọ bụrụ na bọl, tenis, basketball, Formula 1 ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla na-amasị gị, mgbe ahụ ngalaba a ga-amasị gị. N'ime ya anyị na-ahụta akwụkwọ ahụ aja kacha mma maka ekwentị gam akporo gị. Nhọrọ dị iche iche dị iche iche, nke kachasị mma, nke ị nwere ike iji hazie ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nkume ọ bụla.
Na-achọ ndabere iji gbanwee onyonyo nke ekwentị? Mgbe ahụ lelee gallery a na akwụkwọ ahụaja egwuregwu niile dị maka ekwentị ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị ọzọ na akwụkwọ ahụ ajaGa-ahụ ha na njikọ nke anyị hapụrụ gị.